Hadii aad u baahan tahay Raaxada aduunka ,tilmaamtan qaado. | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Hadii aad u baahan tahay Raaxada aduunka ,tilmaamtan qaado.
Wednesday, November 08, 2017 Bulshada Edit
Bulsha:- Nolosha Bani’aadamka waxaa muhiim u ah farxadda ,waxa ayna ku timaadaa arrimo badan oo u baahan in la raadiyo Ragga aduunkan ku nool waxaa marwalba ay raadiyaan in ay helaan Raaxo midda ugu wanaagsan ee ay la qaadan lahaayeen Dumarka,hadana mararka qaar waxaad moodaa in uu jiro jaha wareer badan.
Si aad u noqoto qofka ugu wanaagsan ee mar walba ku nool Farxad laxidhiidha Raaxada ,waxaan kuu tilmaameynaa dhowr arrimood ,oo aad arrintaas ku gaari karto ,hadaba Noqo qofka ugu horeeya ee qaata Tilmaamta ay ku siinayaan bahda hadanews.com.
Waxaan Kuu soo saarnay Shan gabdhood ooh al Sawir galay ,waxaana Shantaba ay yihiin kuwo kala duwan,marka loo eego dareenka Raaxadooda ,Naag walba waxa ay ku jirtaa Group gooni ah marka laga hadlaayo Dareenka.
Hadaba Naagta Numbarka 3-aad ku jirta nooceeda waa midda ugu Raaxada Macaan ,uguna dareenka dhow dhinaca Dumarka,hadii aad Raaxo doon tahay Cabiro qoftaas qaabka ay u sameysan tahay kadib Raadi,hadii ay ku qanci weydana anaga iidda nasaar.